S-Vera Plus Aloe Vera Juice (750ml) အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
S-Vera Plus Aloe Vera Juice (750ml)
👍S-Vera Plus Aloe Vera Juice (750ml)
❀﻿ ❀﻿ FDAအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ Nutrinal Supplement ဖြစ်တဲ့ ရှားစောင်းလက်ပတ်နဲ့ ဂိုဂျီဘယ်ရီရောစပ်ထားတဲ့ သဘာဝဖျော်ရည်
သဘာဝ Organic မြေသြဇာနဲ့ သေချာစိုက်ပျိုးထားတဲ့ ရှားစောင်းလက်ပတ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
သဘာဝရှားစောင်းလက်ပက်ဖျော်ရည်ကို အသက်ရွယ်ရလာသော လူလတ်ပိုင်း လူကြီးပိုင်းများ အတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်
သဘာဝ ရှားစောင်းလက်ပတ်ဖျော်ရည်ကို သောက်သုံးခြင်းဖြင်❆ ❆ ❆ ❆
၂. ကင်ဆာနှင့်ဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပေါ်ခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
၃. သွေးဖြူဥ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို တွန်းအားပေးသည်။
၄. အရိုးအဆစ်များကို သန်မာစေပြီး အူမကြီးနံရံများကိုသန့်ရှင်းစေသည် ,
၅. ဆဲလ်အသစ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်လည်ပတ်အားကောင်းစေသည်။
၆. အပူကြောင့်ဖြစ်သော အနာကွက်များကို ပျောက်ကင်းစေပြီး အရေပြားရောဂါများ ကိုအထူးကာကွယ်ပေးပါသည်။
၇. ကောင်းစွာအိပ်ပျော်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်အား သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေသည်
၈. သွေးထဲမှ သကြားဓါတ်ကိုထိန်းညှိပေးပြီး ဆီးချိုဝေဒနာရှင်များအတွက် သင့်တော်သော ဖျော်ရည်ဖြစ်သည်။
၉. ဦးနှောက်ကို ထက်မြက်စေပြီး ဦးနှောက်နှင့်ပတ်သတ်သောရောဂါများကို ကာကွယ်ပေးသည်။
၁၀. အသားအရေကိုစိုပြေလန်းဆန်းစေပြီး Collagen နှင့် Elastic များ ဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့် အသားအရေကို တင်းရင်းစေပြီး ဝင်းပမှုကိုပေးပါသည်။
၁၁. မျက်စ်ိနှင့်ပတ်သက်သော ရောဂါများကို ကာကွယ်ပေးပြီး မျက်လုံးမှုန်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။
၁၃. ကြွက်သားများကိုသန်မာစေပြီး သွေးအားကောင်းမွန်စေသည်။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Side-effect လုံးဝမရှိတဲ့ ဂိုဂျီဘယ်ရီနဲ့ ရှားစောင်းလက်ပတ်ဖျော်ရည်လေး ကိုသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
ထိုင်းမှာလည်း အရမ်းကိုနာမည်ကြီးနေတဲ့ ဖျော်ရည်တစ်မျိုးပါ
ပါရဂူကြီး ဒေါက်တာဆစ်ထဝီ ကိုယ်တိုင် သဘာဝ Organic မြေသြဇာနဲ့ ရှားစောင်းလက်ပတ်ပင်များကို အသေအချာ သုတေသန ပြုလုပ်ထားပြီးမှ ဖော်စပ်ထားတာပါ။
ကျန်းမာနိုင်ကြပါစေ။ဂိုဂျီဘယ်ရီ ရှားစောင်းလက်ပတ် ဖျော်ရည် ကိုမည်သည့်ရောဂါရှိသူမဆို သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
အမည်: S-Vera Plus Aloe Vera Juice (750ml)